ကိုယ်ခြင်းစာတတ်ပါစေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » ကိုယ်ခြင်းစာတတ်ပါစေ
Posted by same kyaw on Jun 14, 2013 in Think Different | 12 comments
ကိုယ် ခြင်း စာ တတ် ပါ စေ
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် က Selayang pasar borong တွင် ဘင်္ဂလီများ ကိုချန်လပ်ပြီးသကာ လ ရွှေမြန်မာချည်းရွေးဖမ်းတဲ့ပွဲ။
ကားတိုက်မဲ့ဘေးတောင် မကြောက်နိုင်ဘဲ အလုပ်လုပ်ရင်းတန်းလန်းနှဲ့ထွက်ပြေးရတဲ့သနားစရာ ဒို့မြန်မာတွေပါ။
ဒို့လူကြီးတွေ ကဒါ ကို သမ္မတ ဖြစ်ဖို့လောက် နဲနဲမှ စိတ်ဝင်စားမယ်မထင်ပါဘူး။ တိုင်းသူပြည်သားများအပေါ် အလွန်ရက်စက်သော အစိုးရ။သူတို့ကြောက် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေ အနှိမ်ခံ အဆင်းရဲခံပြီး အလုပ်လုပ်နေကြတာဘာကြောင့်လဲ။
ဒီနေ့ Kl မြို့ထဲ ကိုရောက်တော့ တမြို့လုံးမြန်မာဆိုတာ လိုက်ရှာနေရတယ်။လမ်းအပြည့်ရှိတာဘင်္ဂလီတွေ။ စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ ခါတိုင်းဆို မြန်မာဆိုင်တန်းဘက်မှာ မြန်မာတွေ ရ ရက်လုံးပြည့်ကျပ်နေတာဘဲ။ရင်ထဲ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
ယနေ့ ဘင်္ဂလားများဖြင့်ပြည့်နေသော မြန်မာဆိုင်တန်း
အသိမမှားရင်.. မလေးရှားမှာရှိတဲ့နေတဲ့.. ဗမာအပါအ၀င်တိုင်းရင်းသားတွေအရေအတွက်က.. မြန်မာပြည်ထဲက.. ဘင်္ဂါလီတွေထက်များပါတယ်…
ကိုယ်ချင်းမစာ.. မြန်မာပြည်ထဲ.. လူမျိုးရေး/ဘာသာရေးထိခိုက်မှုဖြစ်အောင်လုပ်သူတွေ.. Hate Crime ဥပဒေပြုပြီး.. ထောင်ထဲဆွဲထည့်ထားဖို့ကောင်းတယ်..
မြန်မာပြည်မှာ.. Discrimination/Hate Crime လူလူချင်းခွဲခြားနှိမ့်ချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေ အမြန်ဆုံးပြဌာန်းဖို့လိုနေပြီ…။
ဘာမှမဖြစ်ခင်..မစခင်ကတည်းက..ဒီလိုဥပဒေပြုပေးဖို့ တောက်လျှောက်ပြောနေတာ.. ဥပဒေပြုအမတ်တွေ.. ဘယ်ချောင်သဝေထိုးနေကြသလည်းမသိ…
မီးဆိုတာ.. လက်ပေါ်ကျမှ ပူတယ်လို့ သိကြတယ်နဲ့တူတယ်..။
( သက် ပြင်း ချ သံ )
ဘာကိုဘယ်လိုပြောရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး …
မလေးရှား ကို အလုပ်သမားပို့ ပေးခဲ့တဲ့ အေးဂျင့်တွေ အားလုံး ကို အရင် ဆွဲစေ့ စေချင်တယ်ဗျာ
အင်း.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဆြာမောင်ပေလိုလူတယောက်ရွာထဲရှိတာတော်တော်ကောင်းတယ်..။
ကျုပ် မှာ အပူပိုင်းဒေသ / အလယ်ပိုင်းပေါ့
အဲဒီဘက်က ရွာတွေမှာ နေတဲ့ တပည့်လေးတွေ ရှိပါတယ် ။
မန်းတလေးမှာ လာအလုပ် လုပ်နေကြတာပေါ့
သူရို့ အမျိုးထဲမှာ လဲ မလေးရှား သွား အလုပ် လုပ်နေတဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ်
တရားဝင် အဖြစ် ရောက်နေတာလဲ ရှိသလို
အောက်တန်းစားအေးဂျင့် နဲ့ တိုးခဲ့လို့တရားမဝင် ဖြစ်နေတာတွေလဲ ရှိပါတယ်
အခု သူရို့ တွေ ၊ ကွိုင်တက်နေပြီ ။
တရားဝင် ပို့ ပေးတဲ့ အေးဂျင့် တွေကို မဆိုလိုပါဘူး
ဘာမှမသိနားမလည် ၊ ရွာက ရှိတဲ့ နွားလေး ယာလေး ရောင်း စရိတ်လုပ်ပြီး ၊ အလုပ် သွား လုပ် မယ့် တောသူတောင်သားတွေကို တရားမဝင်ပို့ ပေးခဲ့တဲ့ အေးဂျင့်တွေကို ဆိုလိုတာပါ ။
ဟိုနေ့ က ကျုပ် က ရွဲ့ရေးခဲ့တာကို တစ်ကယ်မှတ်နေလား တော့မ သိဘူး
“ ကိုယ့်အသားမထိ ဘာမှမဖြစ် ” ဆို တာ ရွဲ့ ရေးထားတာပါ
မလေးရှားမှာပဲ အဆင်ပြေနေတဲ့ သူတွေကတော့ ၊ အခုလို ပြဿနာတွေဖြစ်တော့ ၊ မြန်မာ ချင်းချင်း ဆိုတာကိုလဲ နားလည်စာနာပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီကောင်တွေ ပြဿနာ ရှာလို့၊ ငါ တို့ ပါ ၊ လန့် နေရပြီ ၊ အလုပ်တော့ ပြုတ်တော့မှာပဲ ဆိုပြီး တွေးနေတဲ့ လူတွေ လဲ ရှိမှာပါ ။
ပြဿနာ ကို တတ်နိုင်သမျှ ၊ ပါဝင်ကူညီ လိုအပ်တာလေးတွေ လှူဒါန်းပေးနေတာ
မြန်မာနိုင်ငံ က လူတွေ ဆိုတာ
မလေးမှာ ရွာထဲက ကိုဇော်မင်း၊တောတွင်းပျော် တို့လည်းရှိတယ်။
သဂျီးပြောတဲ့ မီးဆိုတာ လက်ပေါ်ကျမှ ပူတယ်လို့ သိတတ်ကြတာလား လို့ မေးစရာပါပဲ။
ကိုယ်ထိမှ ကိုယ်သိတယ်ဆိုတာ အမြင်ကျဉ်းတဲ့၊ အရှည်မတွေးတတ်တဲ့ လူနုံလူအ တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ပါပဲ။
ပုဆိုးခြုံထဲက လက်သီးပြနေကြတဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်တွေလည်း အရှည်တွေးပြီး အမြင်ကျယ်ကြဖို့ လိုနေပါပြီ။
ကျော်စွာခေါင်ရဲ့ ပိုစ့်မှာ မြန်မာလူငယ်တွေ သင်ချင်တတ်ချင်ရင် သူတတ်တဲ့ ပညာလေး လက်ဆင့်ကမ်းချင်တယ်ဆိုသလိုမျိုး ကောင်းမွန်စစ်မှန်တဲ့ မျိုးချစ်စိတ်လေးတွေ ထားနိုင်ကြရင် ကောင်းမယ်။
ကိုယ်ချင်းစာတယ် ဆိုတဲ့စကား လူတိုင်းပြောလေ့ရှိကြပါတယ်၊အများစုကတော့. တကယ်ကိုယ်ချင်းစာလုိ့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး၊လူကြားကောင်းအောင့် ပြောတာပါ၊တကယ်လဲ ကိုယ်ချင်းမစာနိုင်ကြပါဘူး၊တကယ်ကိုယ်ချင်းစာနိုင်တဲ့သူတွေက သူတုိ့ကိုယ်တိုင် အဲဒီလိုအဖြစ်မျိးကြုံဘူးသူတွေပါ၊ ထမင်မငတ် ဖူးတဲ့သူဟာ ထမင်းငတ်လုိ့ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာ ကို တွေးတောပြီးခံစားလုိ့ မရနိုင်ပါဘူး၊အဲ. ထမင်းဆာတဲ့ဝေဒနာလောက်တော့ တွေးပြီး ခံစားလုိ့ရမှာပေါ့
a good indicator showing how hate/ religious , racial measure taken domestically can create unpredictable consequences globally. Recent terrorists bombings in Gaya in India is alsoagood indicator of these consequences. Whatever we do domestically, we should always be mindful of the fact that Myanamr isacountry made up of multi-nationalities as well asaunion of people having various religious faith. Secondly we should neevr forget that Myanmar isanow in 21 century, living peacefully within international community including islamic world. These may be efforts by some political elements trying to make Daw Suu unpopular among buddhist voters. But , rememeber ,agood leader is notafollower of justapopular public opinion but the ones who have courage enough to guide people of the whole country if they are misled in any situation, even at the cost of losing political power.
ဒါကြောင့်ပဲ.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်.. အရေထူပါစေပြောနေရတာပါ…။
ပေါ်ပြူလာနဲ့.. လူချစ်လူခင်ပေါများမှုဖက်လိုက်သွားမှာ.. စိုးမိတယ်…။